Ihe omume ndụ laghachi na Red Rock na Biz Bash na Connect Las Vegas - pisklak.net
Ihe omume ndụ laghachi na Red Rock na Biz Bash na Connect Las Vegas
Ihe omume na-abịaghachi na Vegas, ọ nweghịkwa ụzọ ka mma isi chụpụ ha karịa na Red Rock Casino.
BizBash bụ ahụmịhe ngwakọ ụbọchị atọ maka ihe omume na nzukọ ndị ọkachamara-emepụtara na mmekorita ya na ụlọ ọrụ nne na nna Jikọọ-nke gụnyere nnọkọ mmadụ na nke agụmakwụkwọ emebere iji nyere aka mee ka ụlọ ọrụ mmemme ahụ gaa n’ihu.
Anyị na-anọdụ ala na Njikọ Onye Isi Njikọ Patrick S. Higgins na obi ụtọ na ụlọ ọrụ ihe omume na ihe na-eme ka Red Rock bụrụ ebe na-achọsi ike maka otu.
Kedu ihe na-eme Las Vegas ka ọ bụrụ ebe a na-achọsi ike maka mmemme gị? Kedụ ka Las Vegas si agakọ ruo ebe ndị ọzọ maka mgbakọ?
Nzukọ na ihe omume a na – arụ ọrụ dị mkpa na obodo niile na United States mana anyị maara etu nzukọ si dị mkpa na Las Vegas. Kedu ebe ka mma anyị ga-ejide mmemme izizi anyị nke 2021 karịa na Las Vegas!
Anyị adịla njikere ịmalite ihe omume mmadụ na mmadụ ma anyị maara na Vegas dịkwa.
Kedu ihe kwụpụtara gị gbasara Red Rock mgbe ị na-ekpebi ọnọdụ maka Jikọọ na 2021?
Know mara, ọ ghọọla cliche mana mmekọrịta na mmekọrịta dị mkpa – ọkachasị na-apụta site n’ọrịa ahụ. Ndị mmekọ tụkwasịrị obi kwesịrị ịdị arọ ha na ọlaedo!
Ndị bịara anyị ka na-ekwu maka mmemme Njikọ ikpeazụ emere na Red Rock na anyị maara site na mbido na ndị ọrụ anyị na ndị bịara ga-anọ na nnukwu aka.
You nwere akụkụ kachasị amasị Red Rock?
Maka m, m hụrụ ọnọdụ Red Rock n’anya! Ọ dị mma, nso ọdụ ụgbọ elu ahụ, ọnọdụ ahụ dịkwa mma maka ihe anyị chọrọ ịnwale ma mezuo na Njikọ Las Vegas nke na-ejikọ ma jikọtakwa ndị na-eme atụmatụ na ndị na-eweta ya.
Kedu ihe ị na-atụ anya na ndị ọbịa ga-apụ na ịga njikọ 2021 na Las Vegas?
Anyị na-ele Njikọ 2021 na Las Vegas dị ka ihe dị mkpa iji mee ka ụlọ ọrụ anyị bido dị ka anyị si na 2020 pụta.
Anyị chọrọ ka ndị bịara anyị cheta ihe na-eme ka ụlọ ọrụ anyị dị ịtụnanya! Anyị na-akpọkọta ndị ezigbo mmadụ na ndị ziri ezi na anyị chọrọ ichetara ndị niile bịara anyị otu ọ dị mma ka azụmaahịa a na-atọ ụtọ, ihe ọhụụ, ma na-arụpụta gburugburu nke ejikọtara.
Ka anyị laghachi azụ ahịa!
Ajụjụ: Olee otu i si chepụta echiche ị ga-eri nri ehihie na Aviators Ballpark?
Anyị nwere ihu ọma inwe ọtụtụ ndị otu Njikọ na-akpọ ụlọ Las Vegas.
Ebumnuche ahụ bịara n’isi ụtụtụ na oge anyị na-akpọ oku ma mgbe anyị chọpụtara etu bọlpark dị na Red Rock ọ ga – esi bụrụ onye na – enweghị ntụpọ. Ogige bọlbụ ahụ dị nnọọ mma ma nye ndị bịara anyị ahụmịhe na-atọ ụtọ na ohere ịnweta ikuku na anwụ.
You ga – ekere oke na omume iti batị nke ị hibere?
Kedu, ma tufuo ohere m ịkụ ụfọdụ ndị na-egbu mmiri n’ogige ahụ? Ụzọ adịghị! Aga m abụ onye mbụ n’ahịrị.
Echiche Post: 283